Magaalada Berbera ee Caasimada Gobolka Saaxil ayaa mar keliya lagu dhex arkay bulshada dhexdeeda Wasiirada Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancade, Gaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami iyo wasiirka Arrimaha Dibada Maxamed Biixi Yoonis.
Berbera (HWN) - Wasiirka Warfaafinta Dawlada Somalia Mustaf Dhuxuloow ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhoola-tus ku samayanayay Magaaladda Muqdisho.
Wasiirka oo aanay la soconin ilaalada inta badan lagu yaqaano Masuuliyiinta Xukuumadda Somalia ayaa lagu arkaa meelaha ay dadku ku kulmaan sida Maqaaxiyaha, Xeebta Liido iyo meelo kale.
asiir Mustaf ayaa dhinaca kale raaca gaadiidka ay ka mid yihiin Tagaasida ka dhex shaqaysa Magaaladda Muqdisho, Bajaajta iyo waliba Baaskiilado.
Waxa kale oo uu goor dambe oo habeenkii ah gaadhigiisa gaarka ku dhex maraa jidadka Magaalada isaga oo sheegay in uu uga dan leeyahay sidii uu bulshada caalamka ugu sheegi lahaa in ay nabadi ka jirto Magaaladda Muqdisho.
“Waxa aan socdaalkan uga dan leenahay in aanu bulshado tusno in ay Magaaladda Muqdisho Nabadeedu tahay mid la isku halayn karo” ayuu yidhi.
Dhinaca Kale Dalka Somaliland oo 23-sano ka sii maqnayd midawgii ay la gashay 1960-kii dalkii la isku odhan jiray Somali ayaa masuuliyiinteedu ay yihiin kuwo bulshada dhex gala.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxmed Maxamuud (Siilaanyo), Madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ayaa bulshada mararka qaarkood lagu dhex arkaa in kasta oo aanay badnayn.
Muddo hada laga joogo laba laba todobaad ka hor ayaa Madaxweynaha Somaliland uu dadka ku dhaqan Magaaladda Hargeysa kala qayb galay tukashada salaada Jimcaha iyada oo uu markii dambena lug ku soo maray suuqa weyn ee caasimada.
Maanta oo Jimce ahna madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa salaadii jimcaha dadka ku dhaqan Magaaladda Berbera kala qayb galay, halka uu madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) uu isna dadka ku dhaqan Xaafada Masalaha ee Magaalada Hargeysa kula tukaday Masjid cusub oo halkaasi laga bineeyay.
Magaalada Berbera ee Caasimada Gobolka Saaxil ayaa mar keliya lagu dhex arkay bulshada dhexdeeda Wasiirada Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancade, Gaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami iyo wasiirka Arrimaha Dibada Maxamed Biixi Yoonis oo wakhti ku beegan casarkii reer berbera kula shaahaynaya Mid ka mid ah Maqaaxiyaha Magaaladaasi, kuwaas oo ka mid ah waftiga uu hor kacayo Madaxweynuhu ee ku sugan Berbera.
Kulanka dadka reer Berbera iyo wasiiraddan oo ka mid ah kuwa ugu miisaanka culus xukuumada wakhtigan ka talisa Somaliland ayaa waxa ay sare u qaadaysaa doorka kalsoonida ay bulshada ku dhex leeyihiin.
Geesta kale waxa ay sare u qaadaysaa heerka darajada ay Somaliland nabad-galayada ka jirtaa u tahay mid la isku halayn karo.
Si kastaba ha ahaatee bulshada in ay dib ugu soo laabtaan xubnaha xilalka u hayaa waxa ay sare u qaadaysaa in wax la is-weydaarsado oo ay bulshadu su’aalo ay la gaadhi waayeen Xukuumada si dhib yar ula gaadhaan.